Weziganeko zeenqanawa Enzima iinkalo zobuchule kwi-China ke Shipyards - Amandla Uguqulo - Abaqondisi-mthetho ka-China. Zonke Isitshayina abaqondisi-mthetho kwi-intanethi.
China sesinye oyena ukwakha inqanawe centers ehlabathini, kodwa kunye kukarhulumente ambitious izicwangciso kuba offshore uphuhliso, kwaye yayo umnqweno ukusebenzisa LNG njengoko i-okungokunye amalahle, njengoko i-amandla icebo ukunciphisa pollution, silindele enkulu kuvuka kwi-imfuneko iinqanawaNgo, kuya kubakho elinesixhenxe LNG ukufumana ii-tabs kwi-China, ngamnye ofuna phakathi ezintathu isihlanu LNG carriers ukuqhuba ngalo umthamo. Ukuhlangabezana oku imfuneko, kukhuthaza kuhlumo loqoqosho ukukhusela China ke amandla ukhuseleko njengokuba kubhaliwe isa entsha zokusebenza, Isitshayina urhulumente focused kwi building abaninzi ezi iinqanawa domestically. China sele kwezo meko ukudibanisa dollazi amane bhiliyoni kwi-entsha shipbuilding amaphulo kumacandelo ezintandathu ubudala. Dibanisa, ukuba China lilawula iilwandle ukuba modernize yayo imisebenzi, nayo ayikwazi ukukhula yayo abathengi kuba ephambili izikhephe yi-ezintlanu okanye ngaphezulu. China sele sele ezininzi capable shipyards, kodwa kakhulu kweli phulo wenziwe focused kwi isingxobo iinqanawa, jikelele cargo kwaye tankers.
Korea kwesinye isandla, ubani kukhokela ngakumbi ephambili inqanawe zokwakha ezifana LNG carriers, abaninzi apho bakhoyo ngoku powered kwaye propelled yi-umbane, yenziwe yi-amawaka highly izakhono engineers kwaye designers.
Ukuba China ukuba inzuzo yalo babuza share kule yentengiso, ke vital ukuba ups yayo izakhono isiseko kuhlangana imfuneko engakumbi ephambili izikhephe.
I-i-shanghai Maritime Ngezifundo (i-smu) kwi-China - kunye Amandla GE Uguqulo - uzama uncedo China unako ukwenza oku shift.
Inkqubela-phambili apha ifuna tremendous iteknoloji inkxaso kwaye iinkalo zobuchule kwi-marine isithuba. I-laboratory kwi i-smu, nto leyo yokuqala yayo uhlobo kwi-China, kuya kusinceda unikezelo GE ke abathengi nolwazi kwaye isicelo ephambili iteknoloji yobulali marine ishishini. Abafundi baya kufumana ithuba get izandla-ngomhla amava kwi-olawula lo msebenzi, le ngxelo nololongo scenarios. Olu uhlobo amava kubaluleke kakhulu njengoko sibona intshukumo ngakulo ngakumbi iyanelisa kwaye reliable izikhephe, apho unako kuhlangana ngoku kwixesha elizayo yokusingqongileyo imigaqo. Ukufakelwa kombane ngu iqhosha le Yehlabathi marine kwamanye amazwe kuba kokuba yeemeko moments kwixesha elidlulileyo, kodwa China kuhle lungelelanisa kunye elizayo-mali inyaniso kwi-LNG kwaye offshore uphuhliso. Kunye nokomelela inkxaso evela urhulumente, kwaye enzima inkxaso evela ishishini, sikwindawo elungileyo indawo ukuhlangabezana mngeni. Liu Bo ngumongameli kwaye i-CEO GE - Amandla Uguqulo kwi-China, onoxanduva ukuqhagamshela iqhosha Ngakumbi China abathengi ukuba bale mihla, contemporary izisombululo Yaselwandle, Amandla noshishino macandelo.
Phambi kwakhe indima ebalulekileyo Ngamandla Uguqulo, Liu Bo waba Jikelele Umphathi kuba Ngakumbi China kuba GE-Oli Igesi.
Liu Bo abaziwayo GE kwi- kwaye iye yabanjwa leadership iindima kwi-GE-China, kuquka Umlawuli lezonxibelelwano-Wonke ubudlelwane phakathi kwaye Jikelele Umphathi Urhwebo Nophuhliso kuba GE China kwaye Oluphezulu Umlawuli we-Amandla Amanzi kwaye BOCOG Urhulumente Imicimbi Verticals kuba GE kwi-olimpiki Izisombululo. Phambi ukungenela GE, Liu Bo kokuba isebenza kunye Esso China kwaye Xinhua Iindaba i-Arhente Liu Bo iphethe BA iqondo ukusuka i-shanghai Ngamazwe Uphando Ngezifundo kwaye i-EMBA iqondo ukusuka Rutgers Ngezifundo. Kanjalo iphethe Journalism Idiploma ukusuka Ngezifundo ka-Hawaii GE ke Amandla Uguqulo ishishini usebenza i-science kwaye iindlela amandla uguqulo ukunceda drive - stencils kwinguqulelo yehlabathi ke amandla zophuhliso. Designing kwaye lingenza ephambili motor, drive kwaye ulawulo ubugcisa ukuze evolve namhlanje u-mveliso iinkqubo kuba cleaner, ngakumbi productive elizayo, wakhonza specialized macandelo ezifana umbane, yaselwandle, ishishini kwaye yonke enxulumene neenkonzo.
Jikelele yowiso-mthetho kwaye Masi th Iseshoni
Китай договорен басьтэм кылдэ кадь-зэм. Кыкетӥ люкетэз - вузкарон блог утчан Китай